Indlu yaseFama yasePearlAcres kwiNtliziyo yeLizwe leWayini
"Wamkelekile kwiPearl Acres! Sinegumbi elihle, elihlaziyiweyo elinemigangatho emibini yokuhlambela ikhaya ukuze uyonwabele. Ibekwe ngaphakathi kwe-1 yeemayile ze-5 zewayini kwintlambo. Sineyadi encinci ebiyelwe yesilo-qabane sakho esinemilenze emine ukuze ukonwabele. Konwabele ukupheka. Isidlo ekhitshini elitsha kraca okanye ubhekisele kwincwadana yethu yeendawo zokutyela ezicetyiswayo Phuma ngomnyango wangaphambili ubone amahashe, iiturkeys zasendle, amaxhama kunye nezinye izilwanyana zasendle. uyakonwabela ukuhlala kwakho!
Eli likhaya elihlaziyiweyo elinazo zonke izinto eziluncedo kubomi basefama. Sineengubo ezininzi zokujula, iiseti zepatio ezitofotofo, i-BBQ, kunye nezibiliboco zokutyisa amahashe! Igumbi lokuhlambela ngalinye linesithethi seBluetooth sabucala! Kukho indawo enkulu evulekileyo ekhaya onokuthi uyonwabele, iTV entsha kunye neesofa ezimnandi!
Sihlala kumgama oziikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwisixeko saseWalla Walla. Singaphakathi kwimayile enye ye-Historic Whitman Mission. Yonwabela indalo, izilwanyana kunye nezilwanyana zasendle ngaphandle komnyango wakho wangaphambili. Zintlanu iindawo zewayini eziphezulu ngaphakathi kwemayile nangaphezulu kwe-10 phakathi kweemayile ezi-5. Nceda ujonge incwadi yesikhokelo ebekwe ngaphakathi ukuze ufumane ezinye iindawo zokutyela kunye neendawo zewayini!
Ngexesha lokuhlala kwakho sifuna ukuba ukhululeke kangangoko kunokwenzeka. Emva kokubhukisha uya kuba nokufikelela kwiinombolo zethu zefowuni ukwenza ukuhlala kwakho kube yeyona nto ingcono kakhulu!